Iindlela ezi-7 zokuthumela i-imeyile yeFowuni engaphumelelanga | Martech Zone
Iindlela ezi-7 zokuThumela i-imeyile engaphumelelanga
Lwesine, Okthobha 3, 2013 Lwesine, Okthobha 3, 2013 Douglas Karr
I-ReachMail Statistics ibonisa ukuba ngaphezulu kwe-40% yeimeyile zivuliwe kwizixhobo eziphathwayo. Ndikhangela ii-imeyile kwisixhobo sam esiphathwayo imini yonke ukuze ndikwazi ukufikelela kwii-imeyile ezibaluleke kakhulu. Uninzi lwee-imeyile endizicimileyo ziyorhwebo kwindalo kwaye azifundeki kwi-iPhone yam. Endaweni yokuzama ukusondeza okanye ukutshintshela kwimowudi yomhlaba, ndiye ndizicime. Nangona kunjalo, xa ndifumana i-imeyile eneefonti ezinkulu kunye nolwakhiwo olucocekileyo, ndihlala ndichitha ixesha kwaye ndiskrolela kuyo.
I-ReachMail ikulethela i-infographic yethu kwinto ekufuneka uyiphephe kwimikhankaso yeselfowuni Iindlela ezi-7 zokuqhuba iphulo le-imeyile elingaphumelelanga.
Iimpawu zokuziphatha zitshintshile nge-imeyile ephathekayo kunye nexesha layo lokuba abathengisi be-imeyile babandakanye ezona ndlela zilungileyo zokuqinisekisa ukuba ii-imeyile zabo ziyafundeka, kufanelekile, kwaye zixabisiwe ngababhalisi babo. Nokuba incinci kangakanani, kusabonakala ngathi ndifumana iqhosha lokungabhalisi kwisixhobo sam esiphathwayo xa i-imeyile ingazifezekisi izinto endizilindeleyo.
tags: Uyilo lwe-imeyileimeyile ephathekayoUyilo lwe-imeyile ephathekayofikelela
I-LucidPress: UkuSebenza ngokuPrintayo kwi-Intanethi kunye noPapasho lwedijithali
Iindlela eziThengiswayo zokuThengisa, uMceli mngeni kunye neMpumelelo
Oktobha 8, 2013 ngo-12: 22 PM
Iposti enkulu kunye nomzobo wolwazi kuba ubetha zonke iindawo ezifanelekileyo! Ngelixa kubonisiwe kwi- "negative" lo wenza umsebenzi olungileyo wokuchaza iinqununu ezisisiseko zento ekufuneka uyenzile.